Horumarka cilmi baarista ee dahaarka loogu talagalay shubista ductile iron epc
Birta Nodular, sida nooc ka mid ah qalabka birta ah ee xoogga badan leh oo leh hanti u dhow birta, waxay leedahay faa'iidooyinka qiimaha wax soo saarka hooseeya, ductility wanaagsan, xoog daal aad u fiican iyo xirashada caabbinta, iyo sifooyin farsamo oo aad u fiican Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa sariirta mashiinka, valve , gacan-qabsiga,...
Hagaajinta iyo hagaajinta habka shubista caaryada qolofka tuurista birta
tuurista qoloftu waa isticmaalka ciid dahaarka leh sida walxo cayriin ah, caaryada waxaa lagu kululeeyaa heerkul gaar ah, iyada oo loo marayo toogashada ciidda, dahaarka si loo adkeeyo ciidda dahaarka leh, qaabaynta, samaynta dhumuc gaar ah oo qolof ah, qolof sare iyo hoose ayaa si wadajir ah ugu xidhan xidhidhka, samaynta dhamaystiran...
Falanqaynta habka samaynta cillad ka mid noqoshada slag ee shubka birta ee epc
1 Baahsanaanta cilladaha ka mid noqoshada slag ee dhejinta birta ee leh epc Aad bay u adagtahay in la soo saaro dhejisyo bir ah oo leh caaryar lumay. Waqtigan xaadirka ah, intooda badani waa kuwa xidhashada-iska-caabbinta ah, kulayl-iska-caabbinta iyo shubka-iska-caabbinta iyada oo aan la farsamayn ama ka-hortayn ka-yarayn, ama qaar kale oo gidaarka khafiifka ah ...
Habka samaynta cilada ka mid noqoshada ee tuurista epc
1 Cilladaha ku daridda epc-ka ciladaha Ku darida ciladaha epc-ga waa kuwo aad u badan. Cilladaha ku darida ee shubista epc waxay inta badan si weyn u yareeyaan sifooyinka wax shubista. Isla mar ahaantaana, sababta oo ah qaabka aan joogtada ahayn ee ka mid noqoshada, waxay keeni kartaa dildilaacyo ama xitaa dildilaaca tuurista inta lagu jiro adeegga...
Cilmi-baadhis ku saabsan falanqaynta qiimaha wax-soo-saarka iyo xakamaynta shubista maalgashiga
Wax-soo-saarka maal-gashiga inta badan waxa ku jira afar hab-socod: diyaarinta cutubka, diyaarinta qolofka, dhalaalidda dawaha iyo daawaynta ka dib. Sababtoo ah habka geeddi-socodka ma aha oo kaliya habab kala duwan, qulqulka alaabta Complex, wareegga wax soo saarka dheer, iyo habka shubista waa mid aad u xirfad leh. Th...
Saamaynta cinjirka cad iyo isku xidhaha silica sol ee guryaha ee dahaarka shubida caaryada lumay ee birta shubka ah
Iyada oo horumarinta warshadaha aasaasiga ah ee Shiinaha, ma aha oo kaliya lagama maarmaan ah in la bixiyo tayo sare leh iyo shuban sax ah ee warshadaha wax soo saarka qalabka, laakiin sidoo kale si loo gaaro gobolka qalabka, isticmaalka tamarta yar, wasakhda hoose, iyo gaadho horumar waara. Lo...
Habka EPC waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro shubida birta kaarboon tayo sare leh
by admin 21-07-16
EPC waxay leedahay tayo tuurasho wanaagsan iyo qiimo jaban. Maaddadu ma xaddidna, cabbirku waa ku habboon yahay; Saxnaanta cabbirka sare, oogada siman; Cilladaha gudaha oo yar, unug cufan; Waxaa lagu gaari karaa miisaan ballaaran, wax soo saar ballaaran; Waxay si weyn u wanaajin kartaa deegaanka shaqada, waxay yaraynaysaa xoogga shaqada ...
Dhaqanka codsiga ee qalabka dhamaystiran ee caaryada baaba'a
1 Tallaabooyinka hirgelinta ee habka wax soo saarka EPC Tignoolajiyada EPC waa furaha iyo qalabku waa dammaanadda. (1) Shaqada baarista horudhaca ah Shaqada baaritaanka hordhaca ah waxay u qaybsantaa laba dhinac: marka hore, in la fahmo aqoonta ku saabsan EPC ee internetka iyo buugaagta xirfadleyda; The...
Naqshadeynta hagaajinta habka shubista birta tubbada weyn
1 Cilladaha tuurista ee qaybaha birta ee waaweyn ee godka oo yaraada, porosity-ka yaraanta, ku darida dharbaaxada, daloolka hawada, diirinta, qallafsanaanta iyo wixii la mid ah ayaa ah cilado tuurista caadiga ah ee tuurista ciid ee birta ductile weyn. Cilladahan shubista caadiga ah waxaa badanaa saameeya arrimahan soo socda. Dul weyn...
Farsamaynta iyo ka-hortagga kaarboonka ayaa kor u kaca dusha birta tuurista dhinta ee luntay
Dusha sare ee kaxaynta birta ee EPC waxay had iyo jeer ahayd mawduuc muran badan. Tijaabooyin badan ayaa la sameeyay oo ku saabsan in EPC ay ku habboon tahay soo saarista shubka birta, gaar ahaan shubista birta kaarboonka ee hooseeya. (1) ifafaalaha iyo habka carburization-ka Carburization Dusha...
Codsiga tignoolajiyada prototyping ee degdega ah ee shubista saxda ah ee maalgashiga
Sanadihii la soo dhaafay, iyada oo si tartiib tartiib ah u wanaajisay nidaamka dhaqaalaha suuqa ee Shiinaha iyo hagaajinta degdega ah ee xoogga guud ee dalka, hawada iyo sayniska iyo tignoolajiyada difaaca qaranka ayaa bilaabay inay noqdaan warshadaha horumarka qaranka ee muhiimka ah. Sahminta hawada sare, qaranka d...
Kahortagga hababka ciladaha shubista caadiga ah ee birta shubka
1 Daloollada hawada Astaamaha: Daloollada ku jira shubista waa godadka siman ee cabbirrada kala duwan ee ka jira dusha sare ee wax shubidda. 1.1 stomata fara badan Tirada dalooladani waa yar yihiin cabbirkuna waa weyn yahay. Waxay u qaabaysan yihiin pear ama spherical qaybo ka mid ah dusha sare ee th...
123456 Xiga > >> Bogga 1/8